के युद्धको खतरा टरेको हो ? पेरिस वार्ताले दियाे यस्ताे संकेत « Sansar News
के युद्धको खतरा टरेको हो ? पेरिस वार्ताले दियाे यस्ताे संकेत
१३ माघ २०७८, बिहीबार १४:५४
काठमाडौं । युक्रेनको विषयलाई लिएर शक्तिशाली राष्ट्रहरु युद्धमा उत्रने तयारी गरिरहेका बेला पेरिस वार्ताले बेग्लै तरंग सिर्जना गरेको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मस्को र कीभका राजदूतबीच भएको वार्तामा तत्काल युद्ध टर्ने संकेत गरेको छ ।
तर, यसबाट अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्र नाटो र रुसबीचको तनाव कति कम हुन्छ भन्न गाह्रो रहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको विश्लेषण छ । रुस र युक्रेन दुवैले तत्कालका लागि युद्धविराम जारी राख्न र अर्को महिना फेरि वार्ता गर्न सहमत भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
फ्रान्सेली राजदूतले आठ घण्टासम्म चलेको वार्ताका राम्रा संकेत देखिएको कुरा सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । रुस र युक्रेनबीचको यो वार्तामा फ्रान्स र जर्मनीले मध्यस्थता गरेका थिए ।
युक्रेनको सिमानामा रुसले ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरेसँग युद्धको सम्भावना बढाएको थियो । रुसले सेना परिचालन गरेसँगै नाटो र अमेरिकाले पनि रुसविरुद्ध आक्रमणको तयारी गरेका थिए ।
विश्व युद्ध हुने धम्की दिएका थिए बाइडेनले
अमेरिकाले युक्रेनमा जेभलिन मिसाइल पठाएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उनकी प्रेमिकामाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा रुस अलि नरम भएको मान्न सकिन्छ । पेरिस वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा रुस र युक्रेनले बिनासर्त युद्धविराममा सहमति जनाएका छन् ।
दुई सातापछि जर्मनीको बर्लिनमा सोही विषयमा अर्को बैठक बस्ने उल्लेख छ । फ्रान्सले युद्धविरामको निर्णयको स्वागत गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनका एक सहयोगीले बढ्दो तनावको बीचमा उनले सान्त्वनादायी समाचार प्राप्त गरेको बताए।
नतिजा दुई हप्तामा देखिनेछ
वार्तामा संलग्न रुसी राजदूत दिमित्री कोजाकले धेरै विषयमा असहमति भए पनि पूर्वी युक्रेनमा तत्कालका लागि युद्धविराम गर्न सहमति भएको बताए । दुई सातापछि पेरिसमा जस्तै बर्लिन बैठकमा पनि दुई देशका राजदूतले फेरि वार्ता गर्नेछन् । कोजाकले भने–हामी आशा गर्छौं कि युक्रेनले हाम्रो कुरा बुझेको छ,यसको नतिजा अबको दुई हप्तामा देखिनेछ ।
सञ्चार माध्यमका अनुसार अर्को चरणको वार्ता बर्लिनमा तयारी गरिएको छ । यी वार्ता सम्भवतः फेब्रुअरीको दोस्रो सातामा हुने जनाइएको छ । राम्रो कुरा के हो भने सन् २०१९ पछि पहिलो पटक रुस र युक्रेनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । तर, अब हेर्नु पर्ने विषय दुई देश युद्धविराममा अडिग रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने हो ।
महाशक्तिहरुबीच बढ्यो द्धन्द्ध, बाइडेनको चेतावनीले तेस्रो विश्वयुद्धको त्रास
पाँच हजार बढी मतले सुवेदीलाई पछि पार्दै अगाडि…
विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका कोइराला विजयी